mirror aluminum mpempe akwụkwọ - China Hongbao Aluminium Industry
Mirror polished aluminum mpempe akwụkwọ Alloy: 1050,1060,1070,1085,1100,3003,3005,5005,5083,8011
Iwe Iwe Ọkụ: H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26
1. Standard seaworthy mbupụ mbukota, osisi pallets ma ọ bụ osisi ikpe na kraft akwụkwọ;
2. ndị ọzọ ngwugwu ca-mere nke dabeere na ahịa chọrọ.
3. ngwugwu nnọọ ike.
Nzipu nju: N'ime ụbọchị 30
mirror polished aluminum mpempe akwụkwọ ngwa
1) Ọzọkwa eme arịa. 2) Solar reflective film
3) Ọdịdị nke ụlọ
4) Interior decorating: uko ụlọ, mgbidi, etc.
5) Ngwá ụlọ cabinets
6) Igwe Mbuli decoraction
7) ịrịba ama, nameplate, akpa na-eme ka.
8) mma n'ime na n'èzí ụgbọala
9) ezinụlọ ngwa: friji, ngwa ndakwa nri Ighe, audio ngwá, etc.
10) The n'ji ngwá electronic: mobile phones, dijitalụ ese foto, MP3, U disk, etc.
11) ikanam Ìhè, ala, diffuser ma ọ bụ fluorescent oriọna
mirror polished aluminum mpempe akwụkwọ bụ eke ọdịdị aluminum dị ka ọ na-abịa site Rolling na nkume igwe nri. Hongbao si mirror polished aluminum mpempe akwụkwọ ngwaahịa na-iji capitalize na metal si ọtụtụ ihe pụrụ iche e ji mara, tinyere ala njupụta na ìhè arọ, elu reflectivity, ezi conductivity, UV na anyanwụ na ìhè na-eguzogide, weather-eguzogide, elu ekwedo na ahụkebe ike.
(1) 1070 mirror polished aluminum mpempe akwụkwọ
Iwe Iwe Ọkụ: H24, H18
Mkpa: Bright imecha
Total echiche 86% asị ibe echiche ≤12%
erughị ala ike 125N / mm
mkpụrụ ike 105N / mm2
Rainbow ogo 2
(2) 1085 mirror polished aluminum mpempe akwụkwọ
Aluminum - ụzụ Data
Product ụdị Total Reflectance Specular
Reflectance Agbasa Reflectance
n'ọtụtụ 1-4 alloy
Ọcha iwe iwe ọkụ
(ekweghị ekwe) Min ike ọdụdọ
Mpa Min Vield Ike
Mpa Kacha nta
5036-3 60 Celsius ogologo 60 Celsius trans
ọkọlọtọ 86 86 80 77 15 1 Al 99,85 H18 125 105 2
Mirror polished aluminum mpempe akwụkwọ na ọtụtụ-eji maka Lighting, Ịchọ Mma, Architecture, Consumer Electronics.Hongbao Aluminium mgbe niile na-elekwasị anya na-eweta anodized aluminum eji ọkụ technology ubi. N'oge gara aga afọ, anyị na-na na na a dum n'ịkpa a ọtụtụ ahụmahụ na-ọkụ.
(1) Lighting Mirror egbu maramara aluminum mpempe akwụkwọ
Naa aluminum bụ nnọọ fashionable metal, ọtụtụ-eji ọ bụla ubi. Ruru ya uru nke corrosion eguzogide, n'ibu ike na magburu onwe plasticity, aluminum adabara na-eji dị iche iche n'ibu nhazi. Ke adianade do, ya magburu onwe ìhè echiche Njirimara na elu nhazi technology mee aluminum ọdabara niile iche nke ọkụ na ngwá.
The isi ngwa scopes nke ngwaahịa na-eji na ọkụ na-agụnye:
• N'èzí oriọna
• lattice ọkụ
• Ikanam oriọna na lanterns
• Tri-àmà ọkụ
• Ọwara ọkụ
Previous: na-ekpo ọkụ Rolling aluminum mpempe akwụkwọ
Next: stucco aluminum mpempe akwụkwọ
6061 Aluminium mpempe akwụkwọ
6063 Aluminium mpempe akwụkwọ
7050 Aluminium mpempe akwụkwọ
7075 Aluminium mpempe akwụkwọ
Aluminum mpempe akwụkwọ eriri igwe
Aluminum mpempe akwụkwọ Roll